Kukufanele yini ukuzikhipha ohlwini lwe-HBO? Sichaza ukuthi sikwenze kanjani | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Ukusakaza, Izifundiswa
Eminyakeni yamuva nje, kubonakala sengathi sekuyinhlangano engaphezulu kokujwayelekile kwabasebenzisi ukuthi bazikhiphe ohlwini lwe-HBO uma kuphela inkathi efanayo yeMidlalo yezihlalo zobukhosi, ngaphandle kokunika ithuba kulo lonke ikhathalogu elisinikeza lona.
Ngokwezifundo ezahlukahlukene, inani lababhalisile ku-HBO lehliswe ngama-75% uma uchungechunge lwenkanyezi luphela, uchungechunge oluphele ngendlela, olunokuphela obekungathandeki kuwo wonke umuntu (into ejwayelekile kulolu hlobo uchungechunge lwemidiya). Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile zikhiphe ohlwini lwe-HBO, bese sikukhombisa izinyathelo okufanele uzilandele.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuzikhipha ohlwini ngaphandle kokuzama, kufanele ucabangele inani le- izinto ezingasenza sicabange kabusha ngesinqumo.
1 Izizathu zokuqhubeka nokubhaliselwe kwe-HBO
2 Akukhona konke okuhle ku-HBO
3 Zikhiphe ohlwini lwe-HBO
4 Ungazikhipha kanjani ohlwini lwe-HBO kuVodafone
5 Sebenzisa kabusha ukubhaliswa kwe-HBO
Izizathu zokuqhubeka nokubhaliselwe kwe-HBO
Ngokomlando, i-HBO ingemuva kochungechunge olukhulu lwethelevishini, uchungechunge oluye lwadlula iminyaka lube yizifundo ezingaphelelwa yisikhathi esingahlala sizijabulela futhi. Ezinye izibonelo nge-Sex in Umphenyi Weqiniso, ENew York, The Wire, The Sopranos, Amamitha Amabili Ngezansi, WestWorld, ukuqamba okwaziwa kakhulu.
Kepha ikhathalogi ye-HBO ayisekelwe kuphela kulokho okwedlule. Njengamanje usinikeza uchungechunge olufana ne- IChernobyl, Ukubulala u-Eve noma iGenleman Jack, iTalemaid's Tale, iFosse / iVerdon, iDoom Patrol, Iminyaka Neminyaka… Okuningi kwalolu chungechunge njalo kugcina ngokuthola iziphakamiso eziningi ze-Emmy Award, kuthola isinqamu esikhulu sabaphakanyisiwe.
Kepha futhi, futhi ubeka ikhathalogu ebanzi yamafilimu, yize kunjalo ngeNetflix, ikhathalogi etholakalayo ayikhangi kangako. Ezinye zezihloko esinazo ngokubhaliselwe kwethu kwe-HBO wonke amafilimu eHarry Potter, i-Interestellar, Kong. I-Skull Island, iSuicide Squad, Ifayela laseWarren: I-Enfield Affair, ama-movie weDespicable Me Gru, lonke isaga leRocky ...
Akukhona konke okuhle ku-HBO
Inkinga esiyithola nge-HBO ikhwalithi yakho konke ukusetshenziswa kwamadivayisi weselula namanye amapulatifomu atholakala kuwo (i-Apple TV, i-Chromecast, i-Smart TV, i-PS4, iWebhu ...) futhi kwesinye isikhathi ikhwalithi yevidiyo, ngaphandle kwesivinini esisitholile.
Ngesikhathi sokugcina seMidlalo Yezihlalo zobukhosi, abasebenzisi abakhokha ngokwenkolo okubhaliselwe kwabo, banqume landa isiqephu se-pirate ngekhwalithi ye-HD ukujabulela uchungechunge esikhundleni sokuthi uhlupheke ngekhwalithi embi le nsizakalo yokusakaza ividiyo kwesinye isikhathi esinikeza yona. Ngaphezu kwalokho, kusivumela kuphela ukuthi sikujabulele okuqukethwe ku-1080p, ngaphandle kokukhetha okungu-4k futhi kune-HDR encane.
Ngeke sihlale sithola izinkinga lapho senza kabusha okuqukethwe endaweni yesikhulumi. Zenzeka njalo lapho abasebenzisi abaningi besepulatifomu ndawonye ukufinyelela okuqukethwe okufanayo, into ebilokhu yenzeka njalo nge Game of Thrones, zombili ngesikhathi sokuqala kwayo ngasikhathi sinye emhlabeni wonke nakumahora ngemuva kokukhonjiswa kokuqala.
Okubhaliselwe kwe-HBO, okunentengo eyodwa yama-euro angu-7,99, kusinikeza i- kungenzeka ukuyisebenzisa ngasikhathi sinye kumadivayisi ama-2 kuphela, engasivumeli ukuba sabelane ngayo nabanye abangane noma nomndeni. Nge-Netflix, umkhawulo omkhulu wamadivayisi asebenzisa insiza ngu-4, yize intengo yokubhalisile iphakeme.
Zikhiphe ohlwini lwe-HBO
Uma ngaphandle kwekhathalogi i-HBO esinikeza yona nekhwalithi yochungechunge lwayo, bayaqhubeka bekucabanga lokho khansela okubhalisile nge-HBONgemuva kwalokho sikukhombisa zonke izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ukwazi ukukwenza unomphela.
Ukuze uzikhiphe ohlwini lwe-HBO, kufanele sikwenze ngesiphequluli, ngoba kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo asinayo inketho yokukwenza. Okokuqala, kufanele vakashela iwebhusayithi ye-HBO.
Uma sesifake igama lethu lomsebenzisi (i-imeyili) ne-password, sikhetha uhlobo lokuqukethwe esifuna ukukubuka: uchungechunge nama-movie noma i-Kids (uma sike sasebenzisa le nketho ngaphambilini).
Okulandelayo, siya ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese uchofoza ku-akhawunti yami, lapho singangeza khona ukulawula kwabazali, susa amadivayisi ahlobene ne-akhawunti yethu, hlola umlando wokukhokha, ushintshe iphasiwedi futhi phatha okubhalisile.
Ngokuchofoza ku- Ukubhalisa, ikholomu engakwesokudla izobonisa usuku okuzokhokhiswa ngalo imali entsha ekhadini lesikweletu esilisebenzisela ukukhokhela insizakalo. Phezulu, sithola inketho Zikhiphe ohlwini.
Njengoba sekuyinto evamile lapho sifuna ukuzikhipha ohlwini kunoma iyiphi insizakalo, ekhokhelwayo noma cha, i-HBO incoma ukuthi sibheke ikhathalogi yalokho elisinikeza khona manje nalokho okuzayo. Uma sikucacisa lokho asifuni ukuqhubeka nokukhokhela i-HBO, chofoza ku-Khansela ukubhalisa.
Ungazikhipha kanjani ohlwini lwe-HBO kuVodafone
Uma sibheka ukuthi kuyinsizakalo leyo IVodafone ifaka mahhala Phakathi kwawo wonke amaklayenti anenkontileka yensizakalo yethelevishini nalo opharetha, asidingi ukuzikhipha ohlwini lwendawo yesikhulumi, ngoba ngokungasayiboni, kuningi.
Kodwa-ke, uma kunjalo, Sibambe umuzwa ongabekezeleleki we-HBO Futhi sifuna ukuzikhipha ohlwini, asikwazi ukwenza lokhu ngewebhusayithi ye-HBO, kepha kufanele sikwenze ngohlelo iVodafone elenza lutholakale kithi noma ngewebhusayithi yalo, esigabeni samakhasimende.
Sebenzisa kabusha ukubhaliswa kwe-HBO
Ngaleso sikhathi, sizobuyela esigabeni se-Akhawunti Yami, lapho usuku lokugcina esizokwazi ukufinyelela ekubhaliseni kwethu kwe-HBO manje kuzokhonjiswa khona, kanye nomlayezo Ukubhaliswa kwakho kukhanseliwe. Uma ngaphambi kosuku olusunguliwe Sisicabangele kabusha isinqumo sokuzikhipha ohlwini lwe-HBO, kufanele siye ku-Akhawunti Yami> Okubhaliselwe bese uchofoza ku-Qalisa kabusha ukubhalisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungazikhipha kanjani ohlwini lwe-HBO
Ungasifaka kanjani isinqamuleli kumenyu yokuqala kweWindows
I-New Amazon Echo Show 5: isipikha nesikrini kudivayisi efanayo